Vaovao - Noho izany dia azo vonoina amin'ny jiro ultraviolet ny coronavirus
Manohitra ny valanaretina! Ho lasa hetsika iraisan'ny vahoaka manontolo amin'ny Fetiben'ny Lohataona ny taona 2020. Taorian'ny niainany «rakotra» sarotra hita sy nokosehin'i Shuanghuanglian sy vazivazy hafa, nifantoka tsikelikely tamin'ny jiro famonoana otrikaretina UV ny vondron-tsakaizanay.
Ka ny coronavirus vaovao dia mety hovonoin'ny jiro ultraviolet？
Ny drafitr'aretina sy ny fitsaboana ny pnemonia coronavirus (kinova fitsapana) navoaka tao amin'ny andiany fahefatra an'ny National Health Protection Commission sy ny State Administration ny fitsaboana nentim-paharazana sinoa dia nilaza fa ny virus dia mora tohina amin'ny ultraviolet sy ny hafanana, ary ny maripana dia 56 minitra ambony 30 minitra. Ny etera, ny etanôl 75%, ny famonoana kôlônina, ny asidra peracetic ary ny klôroômbôma dia afaka mamono ny viriosy. Noho izany, jiro famonoana ultraviolet dia mandaitra amin'ny famonoana viriosy.
UV dia azo zaraina ho UV-A, UV-B, UV-C ary ny karazany hafa arakaraka ny halavan'ny halavan'ny halavan'ny onja. Mitombo tsikelikely ny haavon'ny angovo ary ny tarika UV-C (100nm ~ 280nm) dia matetika ampiasaina amin'ny famonoana otrikaretina sy fanamorana.
Ny jiro famonoana ultraviolet dia mampiasa ny hazavana ultraviolet avoakan'ny jiro mercury mba hahatratrarana ny asan'ny sterilization. Ny teknolojia famonoana ultraviolet dia manana fahombiazan'ny sterilization tsy manam-paharoa raha ampitahaina amin'ny teknolojia hafa, ary ny fahombiazan'ny sterilization dia mety hahatratra 99% ~ 99.9%. Ny fitsipika siantifika dia ny fiasa amin'ny ADN an'ny zavamiaina bitika, ny fanapotehana ny firafitry ny ADN, ary ny hahafoana ny asan'ny fiterahana sy ny fanaovana kopian-tena, mba hahatratrarana ny tanjon'ny sterilization.
Manimba ny vatan'olombelona ve ny jiro famonoana ultraviolet? Ny sterilisation ultraviolet dia misy tombony azo amin'ny tsy misy loko, tsy misy tsirony ary tsy misy akora simika tavela any aoriana, fa raha tsy misy fepetra fiarovana ampiasaina, dia tena mora ny manisy ratsy ny vatan'olombelona.
Ohatra, raha tarihin'ity karazan-hazavana ultraviolet ity ny hoditra mibaribary dia hiseho mena ny jiro, mangidihidy, manala baraka; ny matotra aza hiteraka homamiadana, fivontosan'ny hoditra sns. Mandritra izany fotoana izany dia izy ihany koa no "mpamono olona tsy hita maso" amin'ny maso, izay mety hiteraka fivontan'ny conjunctiva sy ny kornea. Ny fanirahana maharitra dia mety hiteraka katarakta. Ny Ultraviolet koa dia manana ny asany amin'ny famotehana ireo sela hoditr'olombelona, ​​mahatonga ny hoditra hihantitra aloha. Tao anatin'ny vanim-potoana tsy manam-paharoa tato ho ato, matetika ny tranga misy fahasimbana ateraky ny fampiasana jiro famonoana ultraviolet tsy mety.
Noho izany, raha mividy jiro famonoana ultraviolet ao an-trano ianao dia tsy maintsy tadidinao rehefa mampiasa azy:
1. Rehefa mampiasa jiro famonoana ultraviolet dia tsy maintsy miala amin'ny sehatra ny olona, ​​ny biby ary ny zavamaniry;
2. Ny maso tsy tokony hibanjina ny jiro famonoana ultraviolet mandritra ny fotoana maharitra. Ny taratra ultraviolet dia misy fahasimbana manokana amin'ny hoditry ny olombelona sy ny membrane mucous. Rehefa mampiasa jiro famonoana ultraviolet dia tokony horaisina tsara ny fiarovana. Ny maso dia tsy tokony hijery mivantana ny loharanon'ny jiro ultraviolet, raha tsy izany dia maratra ny maso;
3. Rehefa mampiasa ny jiro famonoana ultraviolet hamonoana ny lahatsoratra, manaparitaka na manantona ireo lahatsoratra, manitatra ny faritry ny fanadiovana, iray metatra ny halaviran'ny fahombiazany, ary tokony ho 30 minitra ny fotoana fanirahana;
4. Rehefa mampiasa ny jiro famonoana ultraviolet dia tokony hadio hatrany ny tontolo iainana ary tsy tokony hisy vovoka sy zavona ao anaty rivotra. Rehefa ambany noho ny 20 temperature ny mari-pana anatiny na mihoatra ny 50% ny hamandoana dia tokony hitarina ny fotoana ialana. Aorian'ny fikosehana ny tany dia vonoy amin'ny jiro ultraviolet aorian'ny maina ny tany;
5. Aorian'ny fampiasana ny jiro famonoana ultraviolet dia tadidio ny rivotra mandritra ny 30 minitra alohan'ny hidirana ao amin'ny efitrano. Farany, soso-kevitra izahay fa raha tsy namantatra ilay marary ny fianakavianao dia aza mamono otrikaretina ireo vokatra ao an-trano. Satria tsy mila mamono ny bakteria na ny viriosy rehetra amin'ny fiainantsika isika, ary ny fomba mahomby indrindra hisorohana ny aretina coronavirus vaovao dia ny tsy dia mivoaka, manao sarontava ary manasa tanana matetika.
Jiro nify, Jiro fanadinana Halogen, Jiro fanadinana ara-pitsaboana, jiro fanadinana ny rindrina, Jiro mandeha amin'ny fandidiana, Jiro halogen ho an'ny mpandinika biokimika,